I-Cozy Studio, enkabeni yakho konke.
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Carlos
Itholakala enhliziyweni ye-Willemstad (I-UNESCO World Heritage Site kusukela ngo-1997), iDowntown Punda, cishe amamitha angu-500 ukusuka e-Queen Emma Bridge "The old swinging lady", lesi situdiyo esihle sitholakala engxenyeni engaphakathi yesakhiwo futhi sinenhlanganisela ye-Caribbean. -Ukuhlobisa okuphefumulelwe kwedolobha. Le ndawo ingamakhilomitha ayi-5 ukusuka eCuracao Sea Aquarium kanye ne-7 km ukusuka e-Jan Thiel Beach kanye nokuhamba imizuzu emi-3 kuphela ukuya endaweni yolwandle yaseMarichi, ulwandle oluhle kakhulu olunamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka acwebile.
Lapho sisindisa lesi sakhiwo esidala esasiyisitolo se-hardware, esidala kunazo zonke enkabeni yedolobha, sanquma ukuvuselela izinto eziningi ezazisele esitolo se-hardware futhi yingakho ingxenye yomhlobiso yenziwe ngalokho, ikhishi. ama-mosaics kanye nefreyimu yesibuko sokugezela yisibonelo, ama-closets ayenziwe ngezinkuni ezazishiywe endaweni yokugcina impahla futhi ngokuqinisekile ngemininingwane esiyithengile ukwenza lesi studio sibe yindawo ejabulisayo yokuhlala kwakho. Izinsiza zifaka umbhede ongangendlovukazi, igumbi lokugezela elinehitha yeshawa, nekhishi lalo elihlukanisiwe ukuze kuqedelwe i-vibe yasekhaya. Lesi situdiyo simnyama kancane, kulabo abathanda ukuba mnyama kakhulu ngesikhathi sokulala ;-), kodwa kukho konke lokho, sisenobuhle baso.
IPunda kwakuyidolobha lokuqala elasungulwa ngemuva kokufika kwamaDashi. Emlandweni wethu leli kwakuyidolobha elibiyelwe ngodonga eliphethe izakhiwo ezindala kunazo zonke esiqhingini okuhlanganisa nesinagoge elidala elisasetshenziswa nanamuhla emazweni aseMelika, okuhlanganisa iminyuziyamu, ukudla kwendawo emakethe endala (Plasa Bieu), isigodlo sombusi, isonto lamaProthestani elidala kunawo wonke. yaseCuraçao, ulwandle oluhlanzekile lwamanzi acwebile okuqhele ngemizuzu emi-3 nje ukusuka ku-studio, isifunda sase-Pietermaai siyindawo okufanele uyivakashelwe ukuze uthole impilo yasebusuku, ukuzijabulisa nokudla okuhle futhi kuyimizuzu nje yokuhamba usuka esitudiyo nezinye iziza zamasiko ezicebile ongazivakashela. ngenkathi usohambweni olukhululekile.
Uzohlangana nami mathupha estudiyo futhi ngizoba umuntu oxhumana naye ngesikhathi uhlala. Angihlali ebhilidini.